Microsoft waxay u fidisaa Linux Macluumaad Weyn daruuraha | Laga soo bilaabo Linux
Microsoft waxay bixisaa Linux oo loogu talagalay Macluumaadka Weyn ee Cloud
Miguel | | Noticias
Calanka Adeegyada Daruuraha ee Microsoft oo ku yaal Strata + Hadoop World booth ee magaalada New York
Cidna uma qarsoona cidna sida uu caan u yahay Hadoop sida madal loogu talagalay Xogta Weyn. Waxyaabaha ay ka kooban tahay waxaan haynaa inay ku shaqeyso kaliya nidaamka hawlgalka Linux. Si kastaba ha noqotee, bishaan Oktoobar, Microsoft ayaa bilaabay Azure HDInsight, madal Xogta Weyn ee ku jirta Microsoft Cloud adoo adeegsanaya Hadoop, waa Linux!
In badan oo ka mid ah tani uma muuqato war weyn, hase yeeshe waa inaan dib ugu laabannaa 2008, markii Microsoft la bilaabay Windows Azure, oo tixraaceysa adeeggan sida Windows ee daruuraha, oo u oggolaanaya horumariyeyaasha inay sameeyaan codsiyada Windows taas oo ka shaqeyn doonta Xarumaha Macluumaadka ee Microsoft. Si kale haddii loo dhigo, waxaa loo soo bandhigay sidii adeega PaaS (Adeeg ahaan Adeeg ahaan).
Sannadihii ugu dambeeyay wax badan kama maqal ereyga Windows Azure, hadda tixraac Microsoft Azure oo si cad uga tagaysa qorshooyinka adeegga PaaS dhinacna diiradda saaraya qorshaha IaaS (Kaabayaasha Adeeg ahaan).
In kasta oo fikradaha dad badani qabaan, Microsoft waxay muujisay xiisaheeda (iyo xitaa "jacayl") Linux iyo tiknoolajiyada kale ee ka socda bulshada Open Source sida Docker. Xitaa si cad u qiraya taas in ka badan 20% ee server-keeda ayaa adeegsada Linux.
Waa inaan aqoonsanno tan iyo markii uu yimid imaatinka agaasimihii saddexaad, Satya Nadella, Microsoft waxay weji muhiim ah u yeelatay aragtideeda ku aaddan bulshada Source Source. Hoosudhaca Azure ee noqo daruur taageerida heer sare, adigoon takoorin dhadhanka ama baahida macmiilka, Suurtagalnimada isticmaalka Linux waxaa lagu soo daray inta badan adeegyadeeda, laga bilaabo Virtualization ilaa dhufto ee Big Data.
Hindisayaashani waxay ku guuleysteen inay Microsoft meeleeyaan heerka tartan ee barnaamijyada sida Amazon Web Services (AWS) ama Google. Maaddaama mid kasta oo ka mid ah bixiyeyaashani ay ku maareynayaan daruuraha habab kala duwan, macmiil kasta waa inuu tixgeliyaa awooda mid kasta oo ka mid ah xulashadooda, sidaas darteed ku xaddidida Azure kaliya Windows waxay ka dhigeysaa mid aan macquul aheyn in Microsoft ay la tartanto kooxahan.
Dadaallada Microsoft ee ku aaddan jaangooyooyinka cusub kuma eka halkaan.
Bilaabidda barnaamijyada xafiiska ee barnaamijyada moobilada ee Android iyo iOS, xitaa ka hor inta aysan ku shaqeynin nidaamkooda hawlgalka moobiilka, ayaa si tartiib tartiib ah u baabi'iyey caqabadihii hore ee ku xirnaa wax kasta oo ka soo baxa isla bixiyaha.
Intaa waxaa sii dheer, sii deynta .NET waxay u oggolaatay horumarinta barnaamijyada ku saleysan qaabkan nidaamyada Linux iyo OSX. Sidoo kale, waxay bixiyeen qalab bilaash ah oo qaab-dhismeedyo kala duwan ah (oo ay ku jiraan Linux) oo loogu talagalay horumarinta .NET, sida kiisku yahay Muuqaalka Muuqaalka Visual Studio. Lama tirin karo nashqad bilaash ah (oo aad u karti badan) oo ah jawiga horumarinta ee Visual Studio Community 2015.
Waxaa laga yaabaa in shirkadaha waaweyn ee tiknoolajiyada ay fahmeen faa'iidooyinka weyn ee software-ka bilaashka ah? Ma jiri karaan ujeedooyin kale oo qarsoon? In kasta oo isbeddelo siyaasadeed oo xag-jir ah lagu sameeyay Microsoft, dadka jecel ilaha furan ma sii wadi doonaan kalsooni-darrada shirkaddan?
Jawaabaha su'aalahaas iyada oo aan loo eegin, waa inaan qiranno tabarucaadka ay sameysay shirkadda Microsoft oo aan sii wadno u doodidda shirkado badan oo ku soo biira arrintan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Microsoft waxay bixisaa Linux oo loogu talagalay Macluumaadka Weyn ee Cloud
Fikrad wanaagsan, in kasta oo horeyba loo arkay inay la timid taageerada GNU / Linux distros ee Hyper-V, iyo taa lidkeed.
Dabo, oo ah nidaamka ugu amniga badan ee daalacanaya shabakadda 'Deep Web'
Wily Werewolf, nooca Ubuntu 15.10 oo Linux ka dhigi kara mid caan ah